Daawo: Ragii ka dambeeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee baydhabo ka dhacay oo maanta la toogtay | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Ragii ka dambeeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee baydhabo ka dhacay oo maanta la toogtay
Monday April 24, 2017 - 9:29 under Somali News by Tifaftiraha K24
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomalia ayaa saakay dil toogasho waxa ay magaalada baydhabo kula fulisay 4 ruux oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen qaraxyadii mataanaha ahaay ee ka dhacay magaalada baydhabo sanadkii 2016-ka.
Akhriso xukunka ay maxkamadda ku fulisay afartaas ruux iyo faah faahin ku saabsan xukunka.
” Taariikhdu Markay Ahayd 12/03/2016 Abaaro 09:00 subaxnimo waxay Maxkamada Dar 1aad Ciidamada Qalabka Sida Ufariisatay Dacwad Ciqaabeedkii loo haystay Gacan ku dhiiglayaasha kala ah:-
1- Xasan Aadan Mursal 23 jir ah ina Cibaado Mursal ku dhashay Bakool.
2- Cabdi-Ladhiif Macalin Aadan C/raxmaan 34 jir ah ina Dowlaay Aadan Yare ku dhshay Baay.
3- Siyaad Xasan Faarax 41 jir ah ina Mako Haye Shiil ku dhashay Jubada Dhexe.
4-Sharmad Aawoow Maxamad 39 jir ah ina Aamino shariif Abuukar ku dhashay Baay,
Afartaan ruux oo Xafiiska Xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka Al-shabaab isla-markaana ay abaabuleen fuliyeena qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay maqaayada bader iyo meel suuq ah oo ka agdhaw shirkada dahabshiil ee degmada baydhabo, halkaas oo ay ku nafwaayeen 80 ruux oo shacab ah , 45 kalane ay ku dhaawacmeen, qaraxyadaas oo ka dhacay degmada baydhabo Taariikhdu markay ahayd 28/02/2016, waxayna ku xukuntay maxkamada D,1aad Ciidamada qalabka sida Dil Toogasho ah.
Taariikhdu markay ahayd 15/03/2016 Waxaa rafcaan ka qaatay Xukunka Maxkamadda D.1’aad C.Q. Sida Xukusanayaasha.
Taariikhdu markii ay ahayd 28/04/2016 waxay Maxkamadda Sare Ciidamada Qalabka Sida ayaa U fariisatay Dacwad Ciqaabeedkii loo haystay racfaanlayaasha sare ku xusan waxayna mar kale ku Xukuntay Dil Toogasho ah, kadib markii ay ku cadaatay in yihiin kuwi abaabulay fuliyayna qaraxyadii mataanaha ahaa ee 28/02/2016 ka dhacay Degmada Baydhabo.
Maanta oo ay Taariikhdu tahay 24/04/2017 waxaa lagu fuliyay Xukunsanayaasha Xukunkii dilka Toogashada ahaa. ”
Xafiiska warfaafinta maxkamadda ciidamada qalabka sida